किन पाउदैनन् जापानमा नेपाली कुकले राम्रो तलब ? – Nepal Sandesh
किन पाउदैनन् जापानमा नेपाली कुकले राम्रो तलब ?
अहिले जापानमा आउने प्राय सबै कुकको नाम नै १२ लाखे भएको छ । यो कसरी भन्ने कुराको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ, प्राय कुक भिषामा जापान आउने सबैले सरदर १२ लाखको हाराहारी तिरेर जापान प्रवेश गरेका हुन्छन् ।
यसो भन्दैमा जापानमा पैसा नतिरी जाने कुक छदै छैनन्, ठ्याक्कै १२ लाख नै भन्ने अर्थमा बुझ्नु भनेको गलत हुने छ । जापानमा कुकको रूपमा आउन पैसा लाग्दैन भन्ने जसलाई पनि थाहा छ भने पैसो खर्च नगरी कसैले लगिदिदैन त्यो पनि राम्रोसंग सायद सबैलाई थाहा नै छ होला ।
अझै अगाडि समस्या त यो छ पैसा तिरे पनि कस्ले लैजाने । त्यसैले जापान नआउन्जेल जापान ल्याईदिने मान्छे पायो कि भगवानै भेंटें जस्तो गरेर पुज्ने १२ लाख होईन १५ लाखै दिन तयार हुने, जापान छिराईदिए मात्रै पुग्छ काम, दाम केहि पनि दिन पर्दैन सम्म भन्न पछि नपर्ने मान्छेहरु पनि नभेटाईएको पनि होईन ।
जापान छिर्नु मात्रै ठूलो कुरा होईन । आउदैमा काम पाईन्छ पैसा कमाई हालिन्छ भन्ने पनि छैन । जापानमा आईसके पछि पनि काम नपाएर बेरोज़गार हुने प्रशस्त व्यक्तिहरु छन् ।
त्यहि १२ लाखले कैयो किचलो निस्केका घटना पनि छन् । काम दिने सर्तमा बोलाएका साहुले काम नदिने । महिनामा १ लाख तलब दिन्छु भनेकोमा आधा लाख पनि नदिने ।
राम्रो काम मिलेमा सल्लाहाले नयाँ ठाउमा जान नदिने गएमा पनि दिन बाक़ी तलब नदिने । काम नदिने सर्तमा आएकाले काम नपाए पछि जसले ल्याएको हो त्यहि ब्यक्तिलाई जसरी हुन्छ बदनाम गर्न सुरु गर्ने । श्रीमती लगायत आफ्ना परिवारलाई जापान बोलाउन आवश्यक कागजहरु साहुले नदिने जस्ता घटना जापानमा खासै नौलो हुन छोडिसकेको छ ।
यस्ता यावत् कुरा एकातिर छन् भने अर्को तिर रोजगारी गरिरहेका व्यक्ति पनि न्युनतम तलबमा कामगर्न बाध्य छन् । १२ लाख तिरेर जापान आएका कुकले पनि किन पाउदैनन् त भनेजस्तो तलब ? यसको बारेमा मेरो बिवेकले बुझे अनुसार प्रस्ट्याऊने प्रयास गरेको छु । कृपया यो लेख सबै कामदार र रोज़गार दातामा लागु छ भन्ने अर्थमा भने नबुझिदिनु होला।
१.बढ्दो रेष्टुरेण्ट संख्या र घट्दो ब्यापार
जापानमा अहिले रेष्टुरेन्ट खोल्ने चलन नै चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । प्राय हरेक रेल स्टेशनमा १र२वटा ईण्डियन एण्ड नेपाली रेष्टुरेण्ट नामका पसल छन । सानो लगानी गर्ने नेपालबाट १र२ जना कुक ल्याऊने अलि अलि लगानी उठाईहाल्ने पछि जे–जे हुन्छ हुन्छ भनेर ब्यापार सुरु गरेको पनि पाईएको छ ।
ब्यापार राम्रै चले निरन्तरता दिने नभए पसल बेच्ने या बन्द गर्ने कार्यले कामदार कामबिहीन हुने समस्या छ । जसले गर्दा रेष्टुरेण्ट संख्या बृद्दी भएपनि धेरै जसो रेष्टुरेण्टको ब्यापारमा उल्लेखनीय सुधार नहुदा कामदारको सेवा सुबिधामा समेत असर पर्यो । ब्यापार नै नभए पछि साहुले पनि कसरी राम्रो तलब दिने तसर्थ पनि नेपाली कामदार कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।
२.काम सम्बन्धि ज्ञानरदक्षता नहुनु
जापानमा कुकको भिसामा प्रवेश गरिसकेपछि गर्ने काम भनेको स्वत खाना बनाउने नै हो । तर २र४ हजार पैसा तिरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ १० बर्षे अनुभव भएको नक्कली प्रमाण पत्र बनाएर दक्ष कामदार (कुक) को रुपमा जापान प्रवेश गरिसकेपछि सक्कली कुकको काम संहाल्न गार्हो हुने कुरा त स्पष्ट नै छ ।
यहाँ हरेक रेष्टुरेण्ट अनुसार स्वाद अनि परिकार समेत फरक हुने हुँदा साँच्ची कै कुकलाई समेत नयाँ ठाउँमा गार्हो हुने अवस्थामा नक्कलीलाई अवश्य पनि गार्हो हुन्छ । कुक हुन् तर किचनको कुनै पनि काम राम्रोसंग संहाल्न सक्दैनन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई के–को आधारमा तलब निर्धारण गर्ने जापान आउँदा तिरेको १२ लाखको आधार या कामको दक्षता । राम्रो संग आफूले गर्ने काममा दक्ष नहुदा पनि नेपाली कुक जापानमा कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।
३.बिकल्प बिहीन अवस्था
कुक भिसामा आएका ब्यक्ति अन्य कम्पनीमा गएर काम गरि बढी पैसा कमाऊन त सक्छन् तर त्यो झनै जापानको सन्दर्भमा ग़ैरक़ानूनी कार्य हो । कैयौ नेपाली नेपाल फिर्ता भएका अवस्थाहरु पनि छन् । तर सबैले यो जोखिम उठाउन चाहदैन । तसर्थ रेष्टुरेण्टमा नै काम गर्नुको बिकल्प छैन ।
यसरी बाध्यतामा परेका कामदार र रोज़गार दाता बिचको सम्झौता जे जस्तो भएपनि आम्दानी कम्तिमा पनि १ लाख ८० हजारर २ लाख भन्दा बढी हुनु पर्दछ । यो सायद सबै जापानमा काम गर्ने कुकहरुलाई थाहा छ होला कि २ लाख आम्दानी देखाए पनि महिना मर्दा १ लाख पनि पुग नपुग तलब बुझेको । तर गर्ने के बिकल्प केही छैन । हरेक नेपाली मालिककोमा प्राय यस्तै चलन छ । बढी तलबको माग गर्दा जागिरबाट नै हात धुन पर्ने अबस्था नआउला भन्न सकिदैन । तसर्थ पनि कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् नेपाली कुकहरु जापानमा ।
४.साहुहरुलाई कुक छनौटको राम्रो अवसर
जापानमा हरेक नेपाली रेष्टुरेण्टको ब्यापार राम्रो छैन भन्ने हैन । धेरै राम्रो ब्यापार हुने रेष्टुरेण्टहरु पनि छन् । तुलनात्मक रुपमा त्यस्ता रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने कुकको काम पनि गार्हो र तलब पनि राम्रो भए पनि साच्ची नै राम्रो भन्न मिल्ने अबस्था छैन ।
कुकको संख्या बृद्दीसंगै कम तलब भएका ब्यक्ति अली राम्रो तलब भएको ठाउँमा जान अबसर खोजिरहेका हुन्छन् भने राम्रो ब्यापार हुने रेष्टुरेण्टका साहुहरुले पनि कम तलबमा राम्रो काम गर्न सक्ने कुक छनौट गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ । महँगा कुकलाई कि कम तलबमा काम गर्न भन्ने या काम छोड्न भन्ने जस्ता कार्यपनि भएका छन् । यसले पनि राम्रो तलब पाउनबाट बन्चित छन् ।